माथिल्लाे त्रिशूली–१ को प्रवर्द्धक सिएसआरमा अब्बल - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
माथिल्लाे त्रिशूली–१ को प्रवर्द्धक सिएसआरमा अब्बल
पुष १३, २०७४ 2938 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
सरकारले २०४९ सालमा विद्युत् ऐन ल्यायो । यही बेलादेखि जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पाएको हो । विस्तारै विदेशी कम्पनी पनि यहाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लालयित देखिए ।
काेयनले सामाजिक क्षेत्रमा साढे ७ करोडभन्दा बढी खर्च्याे
६० मेगावाटको खिम्तीमा नर्वेले लगानी गरेसँग विदेशी कम्पनी नेपालको जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गरेका हुन् । अहिलेसम्म करिब दर्जन विदेशी कम्पनीले यहाँ लगानी गरिसकेका छन् । अहिले रसुवामा २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गर्न अघि सरेको छ, कोरियन कम्पनी ।
विदेशी कम्पनी संलग्न भएको यो सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । कोरिया साउथ इष्ट पावर कम्पनी (कोएन) ले आयोजना निर्माण गर्न उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । साथै, छिट्टै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दैछ ।
उक्त कम्पनीले आयोजना निर्माणमा जानुअघि नै सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते देशमा विनाशकारी भूकम्प गयो । यसपछि विभिन्न पराकम्पन गइरहे । देशलाई विपद् परेको समयमा कम्पनीले स्थानीयबासीलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्यो ।
गत साउन २९ गते तराईमा भीषण बाढी आयो । यो समयमा पनि कम्पनीले मन फुकाएर आर्थिक सहयोग गर्यो । भूकम्प प्रभावित र बाढीपीडितलाई आर्थिक तथा श्रमदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दै आएको छ ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित, ओलम्पिकमा सहभागी हुने खेडालीदेखि तराईका बाढीपिडितलाई करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
विनाशकारी भूकम्पबाट रसुवा जिल्ला नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्यो । भूकम्पबाट आयोजना प्रभावित साविक हाकु, राम्चे र धुन्चेमा पनि ठूलो क्षति भयो । कम्पनीले यस क्षेत्रमा विभिन्न चरणमा गरी ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । पीडितको उद्दार, राहत, अस्थायी बासस्थान र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग रकम खर्च भएको छ ।
कम्पनीका कर्मचारी भूकम्पलगत्तै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर २ दिनसम्म हेलिकप्टरबाट पीडितको खोजी तथा उद्दारमा खटिएका थिए । भूकम्प भएको पहिलो दिनमै पीडितका लागि ९ टन खाद्यान्न वितरण भएको थियो । यस्तै, तेस्रो दिन पुनः ४५ टन खाद्यान्न आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई बाडियो ।
कम्पनीले पीडितको अस्थायी बसोबासका लागि टहरा निर्माण गर्न जस्ता पाता वितरण गर्नुका साथै ५० वटा शौचालय निर्माण गरिदियो । पानीको मुहानबाट पाइप जोडेर अस्थायी टहरासम्म १ हजार लिटरका ७५ वटा ट्याङ्कीमा खानेपानीको व्यवस्था समेत गरेको थियो ।
चालू वर्षको दशैंमा उत्तरगया गाउँपालिका–१ का प्र्रभावित ७ सय घरलाई खाद्यान्न र खाने तेल वितरण गरेको थियो । पीडितमा कुनै रोगको महामारी फैलिन नदिन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रसुवासँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ वटा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।
यसैगरी, अस्थायी टहरामा सञ्चालन गरिएको हाकुको विद्यालयका ४ सय ४५ जना छात्र–छात्रालाई पोशाक र न्यानो कपडा उपलब्ध गराइएको थियो । पीडितलाई तत्काल आवश्यक उद्दार, राहत र बासको व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिदिएको छ ।
धुन्धेको रसुवा उच्च मावि र राम्चेको सेती भूमी विद्यालय तथा हाकुको स्वास्थ्य चौकीको भवन कम्पनीले निर्माण गरिदिएको हो । विद्यालय भवन निर्माण गर्दा कोरियाली स्वयंसेवकको टोलीले १९ लाख रुपैयाँको लागतमा पर्खाल निर्माण गरेको थियो ।
खेलकुद तथा चाडपर्वमा सहयोग
कम्पनीले दक्षिण कोरियामा हुन गइरहेको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सहभागी हुने २ खेलाडीलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा कम्पनीका उपाध्यक्ष उइ जूङ युन र नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई पुरस्कारस्वरूप २ वटा आकर्षक मोबाइल सहयोग गरिएको थियो । चाडपर्वमा जिल्लास्तरका विभन्न क्लबले आयोजना गर्ने खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पनि कम्पनीले पुरस्कारको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
बाढी पीडितलाई सहयोग
कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमार्फत तराईका बाढीपीडितलाई १ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । कम्पनीले १ करोड २ लाख ५७ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ५१ पैसा र कर्मचारीबाट उठेको ५ लाख ४६ हजार र कोएनको १ करोड २ लाख ५७ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ५१ पैसा सहयोग उपलब्ध थियो ।
यस्तै, चितवन रत्ननगर–२ स्थित बाढीले क्षतिग्रस्त बज्रहरी आधारभूत विद्यालयलाई २२ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । कम्पनीको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको विद्यालयको पर्खाल र तारबार लगाउन ३५ जना कोरियाली स्वयंसेवक खटिएका थिए ।
कम्पनीले भविष्यमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । छिटै आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १६ विद्यालयमा ३१ लाख रुपैयाँबराबरका १ सय डेक्स्टप कम्प्युटर वितरण गर्ने तयारी छ । यी कम्प्युटर विद्यालयको दैनिक कार्यसम्पादनमा उपयोगी हुने विश्वास छ ।
प्रभावित क्षेत्रका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्र–छात्रालाई आंशिक तथा पूर्ण छात्रवृत्ति दिने पनि कम्पनीको तयारी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भई उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने जेहन्दार विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् ।
यसैगरी, स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने पनि कम्पनीको योजना छ । जिल्लाको सोले विमली कृषि सडक निर्माण गर्न कम्पनीले ७० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
उता जिल्ला विकास समिति रसुवासँगको सहमतिअनुसार कम्पनीले उक्त सडक निर्माणमा सहयोग गर्न लागेको हो । यसले हाकुबेँसीलाई सदरमुकाम धुन्चेसँग जोड्नेछ । बेत्रावतीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको बाटो पनि छोटिनेछ ।